Nhau - Nyowani yekugadzira tambo zvigadzirwa zveDaqo boka
Muna 2020, kambani yedu yaita zvakadzama kutaurirana nevazhinji vekumba uye vekunze-kirasi magetsi emabhizinesi, uye vakapedza yakagadziriswa kusimudzira, kumisikidza uye kutumirwa kwenhamba yakakura yeiyo UHV michina.
Daqo Group Co., LTD., Yakavambwa muna 1965, iboka renyika-hombe boka rebhizinesi rakabatanidzwa mune yakakwira uye yakaderera magetsi akazara maseti emagetsi, zvikamu, zvekumhanyisa njanji michina uye mamwe maindasitiri, anosanganisira muminda yemagetsi, kudyara , sainzi uye tekinoroji. Iyo yakagadzira mabhesi mana emabhizimusi muChina, aine vangangoita zviuru gumi zvevashandi uye zviwanikwa zvese zve6 mabhiriyoni yuan. Iine mabhizimusi makumi maviri nemasere, pakati payo manomwe mubatanidzwa pamwe neNokia kuGerman, Moeller kuGerman, Eaton kuUnited States, Cerberus muSwitzerland neAnkater kuDenmark.
Mushure mekushanda padhuze neDaqo boka mainjiniya enjiniya kweinoda kusvika mwedzi mitatu, takapa Daqo Boka nemidziyo inodikanwa yemutsara wekugadzira mutsva. Uye ndapedza iyo yekumisikidza kumisikidza uye kutumwa kwemidziyo mukati memazuva mashanu, iyo nyowani yekugadzira tambo yakanyatsoiswa mukugadzirwa.